Kubva kuChannel 77 inoratidza kuratidza kwe SSL zvitifiketi zvakafanana | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapera, vanogadzira google iwo ari pamusoro peiyo Google Chrome webhu browser browser yakaita sarudzo yekudzima yakaparadzana kunyora kweEV-level zvitupa (Kuwedzera Kuvimbiswa) muGoogle Chrome.
Si kumberi kwemasaiti ane zvitupa zvakafanana zita rekambani rakasimbiswa rakaratidzwa nenzvimbo yekuzivisa mubharaki rekero, ikozvino kune aya masaiti iyo imwecheteyo yakachengeteka yekubatanidza chiratidzo chinoratidzwa pane zvitupa zvine domain access verification. Uye ndeyekuti kubva pane ichave inotevera vhezheni yeGoogle Chrome 77, ruzivo rwekushandiswa kwezvitupa zveEV rucharatidzwa chete mune yekudonha-pasi menyu inoratidzwa kana uchidzvanya pane yakachengeteka yekubatanidza icon.
Tichitora danho iri sereferenzi, gore rapfuura (muna 2018), vanhu veApple vakaita sarudzo yakafanana yeSafari browser ndokuiburitsa muIOS 12 uye macOS 10.14.
Izvo zvakakosha kusimbisa kuti zvitupa zveEV zvinosimbisa zvakatemwa zvitupa uye zvinoda nzvimbo yekupihwa zvitupa kuti ione magwaro ari mudome uye kuvapo kwemuridzi wezvinhu.
Nei masangano anoburitsa zvitupa asisiri kuzoratidzwa mubrowser bar?
Uku kufambisa kwevagadziri veGoogle inotorwa kubva kuongororo yakaitwa neGoogle, kwayakaratidzwa kuti chiratidzo chakashandiswa kumberi kwezvitupa zveEV zvaisapa chengetedzo inotarisirwa kune vashandisi vasina kucherechedza mutsauko uye vasina kuishandisa kana vachiita sarudzo dzekupinza data rakaomarara pamasaiti.
Kugara mukudzidza kweGoogle Izvo zvakawanikwa kuti 85% yevashandisi havana kudzivirirwa kupinda nehumwe humbowo mubara rekero URL «account.google.com.amp.tinyurl.com" panzvimbo ye "account.google.com«, Kana zvikaonekwa pane zvakajairika peji rewebhusaiti yeGoogle.
Kubudikidza nekutsvagisa kwedu pachedu, pamwe neongororo yebasa repamberi redzidzo, timu yeC Chrome Security UX yakaona kuti iyo EV UI haichengetedze vashandisi sekufungidzirwa.
Vashandisi vanoita kunge havaite sarudzo dzakachengeteka (senge kusaisa password kana ruzivo rwekadhi rechikwereti) kana iyo UI yashandurwa kana kubviswa, seEV UI yaizoda kupa yakakosha dziviriro.
Pamusoro pezvo, iyo EV bheji inotora yakakosha skrini real estate, inogona kuratidza inoshingairira kutsausa mazita emakambani mune yakakurumbira mushandisi interface, uye inokanganisa chigadzirwa cheChannel kutungamira kune inorerekera, pane yakanaka, kuratidza kwakachengeteka kubatana.
Nekuda kwenyaya idzi uye kushomeka kwayo kubatsira, isu tinofunga kuti ndeyakanakisa kune ruzivo ruri papeji.
Iko kuchinjika kweiyo EV mushandisi interface chikamu chemafambiro akapamhamha pakati pemabhurawuza kuvandudza yavo yekuchengetedza mushandisi interface hunyanzvi mukuona kwekufambira mberi kwazvino mukunzwisisa nzvimbo ino yakaoma.
Kumutsa kuvimba saiti kune vashandisi vazhinji, zvakazove zvakakwana kungoita iro peji riite sepakutanga.
Semagumo, zvakagumiswa kuti zvakanaka zviratidzo zvekuchengetedza hazvishande uye zvakafanira kutarisa pakuronga kuburitsa kwambiro zvakajeka nezvematambudziko.
Semuenzaniso, chirongwa chakafanana chakango shandiswa kune zvinongedzo zveHTTP zvinonyatsoratidzwa sekusachengeteka.
Panguva imwecheteyo, ruzivo rwunoratidzwa zvitupa zveEV runotora yakawanda nzvimbo munzvimbo yekero bar, inogona kutungamira mukuwedzera nyonganiso kana uchiona zita rekambani mubrowser interface, uye zvakare inotyora mutemo wechigadzirwa kusarerekera uye unoshandiswa kufefitera.
Semuenzaniso, iyo Symantec Certification Authority yakaburitsa Chitupa Chinozivikanwa Verified, zita rayo rairatidza vashandisi vanyengedzwa, kunyanya kana zita chairo rezita rakavhurika risina kukwana mukero kero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubva kuChannel 77 iko kusimbiswa kwezvitifiketi zveSSL kucharatidzwa zvakafanana
Imwe nzira nyowani yakawanikwa yekushandisa kushomeka muSQLite